बार र बेञ्चका सेतु – United We Blog
Posted byUWB March 2, 2006 Posted inGuest Column
सम्मेलनमा सर्बोच्चका न्यायाधिश अनुपराज शर्मा (दायाबाट दोस्रो) र नेपाल बारका अध्यक्ष शम्भू थापा । साथमा (बायाबाट पहिलो) सर्बोच्चका अर्का न्यायाधिश बलराम केसी र बारका उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसी । तस्बिर राजेश केसी ।
हरेक क्षेत्रमा निरङ्कुश दरवारको तावेदारी गर्ने लहर चलिरहेको बेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी धारमा प्रस्तुत गरेका छन्
विवाहपछि पहिलोपल्ट माइती फर्केकी छोरीको मन कस्तो हुन्छ ? कानुन व्यवसायीबीच आफूलाई पाउँदा त्यस्तै अनुभूति गरे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनुपराज शर्माले । न्यायालयका दुइ अनिवार्य अंग बार र बेञ्च । छ महिनायता यी दुइबीच सम्बन्धको मात्रा घटबढ भइरहेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा बारले आफ्नो औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशलाई नबोलाउने निर्णय गरेपछि चुलिएको तनाव घटन सकेको छैन । यसको पहिलो असर प्रस्टै देखिन्थ्यो- बुधबार (हिजो) को कानुन व्यवसायी सम्मेलनमा । स्थापनाको स्वर्ण होत्सव मनाइरहेका बेला सम्पन्न हुने बारको ऐतिहासिक सम्मेलनको प्रमुख अतिथि को बन्ला ? मुलुकभरबाट भाग लिन आएका कानुन व्यवसायीमा यो प्रश्नले भित्रैदेखि गड्नु स्वाभाविक थियो । यस्तैमा सम्मेलनस्थल वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र टुप्लिएपछि कालो कोटधारीका तालीले स्वागत पाएका थिए न्यायाधीश शर्माले । ‘विवाहपछि पहिलोपल्ट माइती फर्केकी छोरीलाई जस्तै अनुभूति भइरहेको छ,’ बार माइतीसरह भएको संकेत गर्दै उनले भने- ‘भेटघाट सुखद भए पनि त्यतिबेला घरका सबै कुरा ती छोरीले भन्नचाहिँ सक्दिनन् ।’
तीन दशकको वकालतको अनुभव सँगालेका न्यायाधीशले यसो भनिरहँदा सहभागी कानुन व्यवसायीहरू गम्भीर देखिन्थे । कहलिएका वकिलबाट शर्मा दुइ वर्षघि सीधै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।नागरिक हक, मानव अधिकार र संविधान रक्षा गर्न नसक्ने निष्कर्षनिकाल्दै पुस १८ मा प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेल र अस्थायी न्यायाधीश पवनकुमार ओझालाई औपचारिक कार्यक्रममा बहिष्कार गर्ने निर्णय नेपाल बारले गरेको थियो । पूर्वनिर्णय अनुसार सम्मेलनमा इतिहासमै पहिलोपल्ट प्रधानन्यायाधीशलाई निम्तो दिइएन । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, रामनगिना सिंह र खिलराज रेग्मी भने न्यायिक भ्रमणका क्रममा केही सातादेखि अमेरिका छन् । पौडेल र ओझाबाहेक सबै न्यायाधीशलाई बोलाए पनि कार्यक्रममा भने शर्मा र सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीश बलराम केसीमात्र सहभागी भए ।
सर्वोच्चको ‘पवित्र हात’ सम्मेलनमा पाएको भन्दै बार अध्यक्ष शम्भु थापाले मन्तव्य राखेपछि फेरि तालीको गड्गडाहट सुनिएको थियो । अघिल्ला वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना, अधिवक्ताहरू सुवास नेम्बाङ, हरिहर दाहालका मन्तव्यले पनि न्यायाधीश शर्मालाई बोल्न हौस्याएको थियो । श्री ५ ले संविधानको स्रोत आफैंलाई घोषणा गरेपछि न्यायाधीश ‘निरीह’ हुनुपर्ने अवस्था भन्दै ढुंगानाले व्यंग्य गरेका थिए । वाक्पटुताका धनी नेम्बाङले भने मन्त्रिपरिषद् उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीसँग प्रधानन्यायाधीशको ‘कुम जोडाजोड’ को प्रसंग कोट्याइहाल्न भ्याए । ‘माइतीघर आएपछि तेरा सासू-ससुरा कस्ता छन् भनी सबैले सोध्छन् । तर दुलहीले खुलस्त पार्न सक्दिनन्,’ फेरि भावुक हुँदै शर्माले भने- ‘त्यस्तै हो, मानव अधिकारप्रति म प्रतिबद्ध छु । तर अरूको प्रतिबद्धताको ठेकेदारी लिन सक्दिन ।’
शर्मासहितको इजलासले माघ १९ पछि नागरिक अधिकारका पक्षमा थुप्रै फैसलाहरु भइसकेका छन् । शाही आयोग खारेज गर्ने ५ न्यायाधीशको विशेष इजलासमा उनी पनि सामेल थिए । शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीको इजलासले एफएमहरुले समाचार प्रसारण गर्न पाउने भनी सरकारका विरुद्ध आदेश जारी गरेका थिए ।
सिंगो न्यायपालिकाको अभिभावक हुँदा प्रधानन्यायाधीशको अभाव खडकिनु पनि स्वाभाविक थियो । अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि सहभागीहरू भने त्यसलाई व्यक्त गरिरहेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्याय सहभागी भए पनि केही बेरमै फर्किएका थिए । ‘अदालतको बल भनेको कानुन व्यवसायी हुन्,’ पूर्व न्यायाधीश अर्याल भन्दै थिए- ‘कानुन व्यवसायीको बल पनि अदालत नै हो ।’ यो अभावमा दुइ अंगबीच पुलको काम गरेका थिए न्यायाधीश शर्माले । ‘यो रिक्तता सधैं रहनुहुन्न,’ पूवअध्यक्ष दाहालको निष्कर्षथियो- ‘यसबारे पनि सम्मेलनमा छलफल हुनुपर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई बहिष्कार गरेपनि आफ्नै पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाउदा पाउँदा कानुनव्यवसायीहरुको मनमा हर्षो चमक देखिन्थ्यो ।
बालकृष्ण बस्नेत कान्तिपुर दैनिकका कानून सम्बाददाता हुन् जसलाई बुधबारको सोही सम्मेलनमा नेपाल बारले प्रदान गर्ने ‘उत्कष्ट कानूनी पत्रकारिता पुरस्कार’बाट सम्मानित गरिएको घोषणा गरिएको थियो ।
10 thoughts on “बार र बेञ्चका सेतु”
त्यस्तै हो, मानव अधिकारप्रति म प्रतिबद्ध छु । तर अरूको प्रतिबद्धताको ठेकेदारी लिन सक्दिन ।’
असल छोरीले माईतीको ईज्तत राख्नु त पर्यो नि ।